ဗမာအစိုးရ၏အုပ်ချုပ်မူအဆက်ဆက် Discrimination လုပ်ဆောင်မူ ~ SAI SENG SERK
Home » MYOPINION » ဗမာအစိုးရ၏အုပ်ချုပ်မူအဆက်ဆက် Discrimination လုပ်ဆောင်မူ
ဗမာအစိုးရ၏အုပ်ချုပ်မူအဆက်ဆက် Discrimination လုပ်ဆောင်မူ
အစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ. ပတ်သက်လာရင် အမြဲတမ်း ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်။Discrimination အခုနိုင်ငံရေး အပစ်အခက်ရပ်တဲ.နေရာမှာလဲ Cease fire တစ်မျိုးကြီးသိပ်ပြီးတော. Transparency မဖြစ်ဘူး။အခုပဲမပာုတ်ဘူးခေတ်အဆက်ဆက်ပဲကျွန်တော်တို.ရှမ်းပြည်မှာဆိုရင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေက အရမ်းများတာ အင်အားနည်းငယ်မဆို အများကြီးပဲ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ.အစည်းတွေ ဒါပေမဲ. အစိုးရ၏ မူဝဒါသည် တိုင်းရင်းသား တစ်ဖွဲ.နှစ်တစ်ဖွဲ. အုပ်ချုပ်မူ လုပ်ပိုင်ခွင်.မူနဲ. Demand တို.ကမတူကြဘူး။ကျွန်တော်က ရှမ်းဆိုတော. ရှမ်းပြည်က အကြောင်းပဲပြောတော.မယ်။ဦးခင်ညွန်.ခေတ်တုန်းကဆိုရင် ကျွန်တော်တို. ရှမ်းလက်နက်ကိုင်လဲ အရမ်းကိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ. တစ်ဖွဲ.နဲ.တစ်ဖွဲ. အစိုးရသည် သဘောထားချင်းထားတာ လုပ်ပိုင်ခွင်.ပေးတာမတူပါဘူး။ကျွန်တော်တို. MTA ခေတ်တုန်းကဆို MTA ကပြိုကွဲပြီလို.ပြောတော. အဲထဲက ဗမာအစိုးရလက်အောက်မနေချင်တဲ.သူတွေ သူ.ကျွန်မခံချင်တဲ.စိတ်ရှိတဲ.လူတွေကတော. Submit မလုပ်ချင်တဲ.သူတွေကတော. အဲထဲကနေခွဲထွက်သွားကြတာပေါ.နော် နံပါတ်တစ် စ၀်ကန်းရွက် တစ်ဖွဲ.ခွဲထွက်သွားတယ် နှစ် စ၀်ရွက်ဆစ် တစ်ခုကွဲထွက်သွားတယ် နောက်ထပ် တစ်ဖတ်ကျန်ပါသေးတယ် ကျွန်တော် သူတို.၏ဦးဆောင်မူနာမည် မမှတ်တော.လို. နောက်ထပ်ကောရှိပါသေးတယ် အဲဒါကတော. ၀ လူမျိုးပေါ.အဲဒါလဲ ခွဲထွက်သွားတယ် အဲထဲက ခွဲထွက်သွားတာ လေးဖွဲ.တောင်ရှိနေပါပြီ။ဒါပေမဲ.ခွဲထွက်သွားပြီး အဲချိန်က SSA ဆိုတာ ရှမ်းမြောက် ၀မ်းပိာုင်း တို.ပဲရှိပါသေးတယ်။အခုတော. SSPP/SSA ပေါ.။
ကျွန်တော်တို.ရှမ်းပြည်နယ်မှာ လက်နက်ကိုင် ရှမ်းဖွဲ.ထဲကဆိုနာမည်ကြီးလာခဲ.တာ စ၀်လွယ်မောင်းနဲ.စ၀်ကိုင်ဖ တို.က စိန်ကျော.အဖွဲ.ပေါ.နော်။စ၀်ပန်ဖွဲ.တို.ကြတော. အခု SSPP/SSA ၀မ်ပာိုင်းပေါ.နော် နောက်ထပ် စ၀်ကန်းရွက်SSNA ပေါ. အဲအဖွဲ.သုံးဖွဲ.ဆိုရင် ပြန်ကြည်.လိုက်ရင် ၀မ်ပာိုင်းနဲ. စိန်ကျော.တို.ကငြိမ်းချမ်းေ၇းအဖွဲ.အစည်း သမားလို. အစိုးရကသတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ကယ် စ၀်ကန်းရွက်
SSNA ကြတော. အပစ်ရပ်ငြိမ်းချမ်းရေးလဲမပာုတ်ဘူး ဘာမှလဲ သိသိသာသာမဖော်ပြဘူး။ အဲထဲက လက်ကျန် စ၀်ရွက်ဆစ်က သူတို.အဖွဲ.သုံးဖွဲ.ကိုလာရောက်စည်းရုံးပြီး ရှမ်းလက်နက်ကိုင်ကို တစ်ဖွဲ.ထဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို. မြောက်ပိုင်းကိုရောက်လာတာ အဲတုန်းက ဗမာအစိုးရနဲ. စ၀်ရွက်ဆစ်တို.နဲ. လုံးဝ အပစ်ရပ်မူမရှိဘူး နေ.စဉ်သလိုပဲ ၁၉၉၆ ခွန်ဆာ လက်နက်ချပြီးနောက် ခေတ်အဆက်ဆက်ပဲ အပစ်မရပ်ခဲ.ဘူး။မြောက်ပိုင်းရောက်လာတော. ရှမ်းတပ်မတော်ကိုတစ်ဖွဲ.ထဲဖြစ်အောင် လာလုပ်တာ အဲတုန်းကအစိုးရက စ၀်ရွက်ဆစ်အဖွဲ.ကို သူပုန် ဓားမြ အဖွဲ.လို.သတ်မှတ်ထားတာ ဒီ ၀မ်းပာိုင်းနဲ. စိန်ကျော. တို.နဲ. လုံးဝ ဗမာအစိုးရက မူသဘောထားချင်းထားတာ မတူဘူး။ဒီလိုပဲအခုလဲပြန်ကြည်.မယ်ဆိုရင် အစိုးရက Cease fire တာလုပ်နေတာ တိုင်းရင်းသားတစ်ဖွဲ.နဲ.တစ်ဖွဲ. ခွဲခြားမူ Discrimination လာလုပ်နေသေးတယ်။ဥပမာ-အခု ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း SSPP/SSA နဲ. ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်း RCSS/SSA ကြတော. အခွင်.အရေး Demand မပေးခဲ.ဘူး။အခုကြည်.လိုက်မယ်ဆိုရင် ဦးခင်ညွန်.လုပ်ချ ရူပ်လာခဲ.တဲ. ဒီ ၀ UWSA ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း) ၊ မိုင်းလား NDAA-ESS ဒီအဖွဲ.တွေကြတော. အခွင်.အရေးအရမ်းအများကြီးပေးခဲ.တယ်။အဲထဲက အထူးစပါယ်ရှယ်အခွင်.အရေးရတာ ၀ တပ်မတော်ပဲ။အခုလဲ အစိုးရလုပ်တဲ. ငြိမ်းချမ်းရေး Cease fire
မှာ UWSA and NDAA-ESS တို.ကြတော. သပ်သပ်လုပ်တယ်ဗျာ။သူတို.ဒီအဖွဲ.နှစ်ဖွဲ.ကို ကျန်တဲ.တိုင်းရင်းသားတွေနဲ. ထိုနည်းသူမဆက်ဆံဘူး Discrimination လုပ်တာပေါ.။ အခု ၀ ကပြည်နယ်အဖြစ်တောင်းတယ်ဆိုတာ အများ Desire နဲ.ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ. ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲနဲ.တော.မပာုတ်ပါဘူး။ရှမ်းပြည်လူထုနဲ. ၀ ပြည်နယ်ထဲကတိုင်းရင်းသားတို.၏ ဆန္ဒကိုကောက်ခံရမှာပေါ. အဲဒါနဲ.မပြီးသေးပါဘူး လွတ်တော်ထဲလဲ တင်သွင်းရအုံးမယ်လေ။အစိုးရက ဒီ ၀ တို.ကိုအခွင်.အရေးများများပေးလေ နောက်တစ်ချိန်ကြရင် ဒီပြသာနာကို ကိုင်သွယ်ဖို. အင်မတန် ခက်လဲ.လိမ်.မယ်လို. ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။လိုင်ဇာနဲ. လောခီး တို.လုပ်တဲ. Ethnic Group Organization ပာာဝ နဲ. မိုင်းလားတို. မတက်လာတာလဲ အင်မတန် အံ.သြဖို.ကောင်းပါတယ်။တစ်ချိန်ကြ
ရင် မြန်မာနိုင်ငံပာာ တရုတ်ကိုလွမ်းမိုးမှာကိုစိုးလို.ပါ ကျွန်တော်တို.အချင်းချင်း Fireလုပ်နေတဲ.ချိန်မှာ တစ်ဖက်ကလူများနိုင်ငံတွေက မြန်မာပြည်ကထွက်ကုန်တွေတောင်မာသွားကုန်ပြီ။အစိုးရသည် ရှမ်းပြည်ကလူမျိုးငယ်တွေကို ခွဲခြားဆံဆက်တာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ ဘယ်တိုင်းရင်းသားတွေမဆို Equate လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဒီ TNLA အဖွဲ.တို.ကြတော. လူမျိုးပျောက်သွားအောင် Eradication လုပ်ပြစ်တယ်။နောက်ထပ်အCease Fire လုပ်ဖို. အစိုးရလုံးဝ ကမ်းလှမ်းမူမလုပ်တာ WNO WNA တို.အဖွဲ.တစ်ဖွဲ.ကျန်သေးတယ်။
အဲဒါတွေလဲ သူတို.ကလဲ တိုင်းရင်းသားတွေပဲ တန်းတူညီမျှမူလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ် အင်အားတောင်.တင်းတဲ.အဖွဲ.ကြတော. အထူးခံစားခွင်.ပေးပြီး ကျန်တဲ.အဖွဲ.ငယ်တွေကြတော. ပစ်သတ်တယ် အဲဒါက မတရားဘူး။အခုချိန်ထိကြည်.ပါလား ၀ တပ်မတော်နဲ. အပစ်ခက်ရပ်တာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ တောင်ကျော်လာပြီ။ကျွန်တော်တို.ရှမ်းလူမျိုးကြတော. နေ.စဉ်သလိုပဲ ပစ်ခက်မူရှိတာ။ ကျွန်တော်ထင်သလောက်တော. ဒီ UWSA/NDAA-ESS တို.အဖွဲ.တွေကလဲ နောက်ဆုံးလုပ်ပိုင်ခွင်.ဆိုလဲ ၀ ကများသွားပြန်ရော ဒီ NDAA-ESS အဖွဲ.က ပိုပိုလိုလိုတပ်အဖြစ်ထားပြီး ရှမ်းတပ် တောင်နဲ.
မြောက်ကြတော. Offensive လုပ်တယ် ၀ လူမျိုးကြတော. အခွင်.အရေးအထူးအပြည်.အ၀ ခံစားရတယ် ဒါပာာ တစ်ချိန်ကြရင် အစိုးရ၏ မူဝါဒသည်
တက်မူမစဉ်းစားနဲ.အုံး အရင်ဆုံး အရေးကြီးဆုံးက တိုင်းရင်းသားအရေးပဲ အခုလုပ်နေတဲ.Cease fire လဲ ရုပ်တိ ကိုမရှိဘူး မရှင်းဘူး။
တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းပြေလည်မူ ကြီးငယ်မခွဲ ၀င်ရောက် ရှာဖွေပြီး တစ်ဦးနဲ.တစ်ဦး တန်းတူမူပေးပြီး လေးစားကြမယ်ဆိုရင်အခု တိုးတက်နေတဲ. ထိုင်းနိုင်ငံ လူမျိုးတောင် ငါတို.နိုင်ငံထဲ ခိုင်းစေ. လာလုပ်နေရပြီတကယ်တမ်းဆို ထိုင်းသည်ဗမာလက်အောက်တောင်နေဖူးသေးတယ် နောက်ဆုံး။ဗမာပြည်ကပဲ ထိုင်း နိုင်ငံထက်နိမ်.သွားတာ။ဘာလို.လဲဆိုတော. အစိုးရ၏မျက်လုံးထဲမှာ တိုင်းရင်းသားအရေးကို တန်ဖိုးမထားလို.ပေါ.။ တရုတ်နဲ.ပတ်သက်မူရှိတဲ. လူမျိုးပဲသူတို.ဦးစားပေးပြီး Freedom and liberation ပေးတာ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခွဲခွဲခြားခြားနဲ. UWSA and NDAA-ESS တို.အဖွဲ.ကို Cease Fire လုပ်တဲ.နေရာမှာ ကျန်တဲ.တိုင်းရင်းသားနဲ. မရောနှောပဲနဲ. သပ်သပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုက တရားမကျတာ။တိုင်းရင်းသားနဲ. ဆက်ဆံတာတစ်မျိုး။ ဒီတရုတ်လူမျိုးပွား UWSA အဖွဲ.ကြတော.ဆံဆက်တာတစ်မျိုး အဲလိုမလုပ်သင်.ပါဘူး။ Equate ပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်။